ချစ်တဲ့စိတ် အကောင်းမြင်စိတ်ဖြင့် ခရီးသွားပါ……. – YANGON STYLE
ချစ်တဲ့စိတ် အကောင်းမြင်စိတ်ဖြင့် ခရီးသွားပါ…….
ပလောင်တောင်တက်တုန်းက ရွာမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အဖွား
ဒီတစ်ခါတော့ ခရီးသွား Blogတွေရေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ TD ခရီးသွားရင် ဘယ်လိုပုံစံသွားလဲ၊ ဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့သွားလဲဆိုတာရယ် TD သွားခဲ့သမျှ ခရီးမှာတွေ့ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ လူတွေအကြောင်းရယ်ကို Sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူ ၁၀၀ မှာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ ခရီးသွားရတာကို နှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သာ မသွားနိုင်ကြတာ လူတိုင်းနီးပါးခရီးထွက်ရတာကို သဘောကျကျမှာပါ။ အဲ့တော့ ခရီသွားရင် ဘယ်လိုမျိုးစိတ်လေးထားရင် ပိုပျော်ဖို့ကောင်းမယ်၊ ပိုပြီးအမှတ်တရတွေကျန်ခဲ့မယ်ဆိုတာလေးကို ဝေမျှပေးမယ်နော်
ပင်လောင်းကရွာတစ်ရွာမှာ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အဖွားနဲ့ စကားတွေပြောဖြစ်ကြရင်း အပြန်လက်ဆောင်ဆိုပီး သံပုရာသီးတွေပါ ပေးလိုက်လေရဲ့
တီးတိန် ရှောင်စျောန်းရွာရောက်တိုင်း မုန့်ကျွေးနေကြ
မုလအိသွားတုန်းကတော့ တစ်ယောက်တည်း ပြန်လာတော့ အပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးရလာတယ်
ခရီးတစ်ခုစထွက်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်သွားရမယ့်နေရာဒေသအကြောင်းကို အရင်ဆုံးသိအောင်လေ့လာပါ။ ငါတို့က Tour နဲ့သွားမှာပဲ Tour ကအကုန်စီစဉ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီး ဘာမှမသိတာမျိုးတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့နော်။ ဥပမာ ကိုယ်ကချင်းပြည်ကို သွားမယ်ဆိုပါစို့
အရမ်းကိုရိုးသားပြီး ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့ ပင်လောင်းကချစ်ဖို့ကောင်းသူတွေ
အရမ်းရိုးသားတဲ့ ဒေသခံတွေဆီက လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေ အားပေးခဲ့နော်
တောင်ကိုးလုံးတက်တော့ မသိတဲ့လူတွေအများကြီးနဲ့ ခင်ခဲ့တယ်
ချင်းတောင်မှာဆို ဘာတွေမရှိဘူးလဲ၊ ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေကြုံရနိုင်လဲ၊ ကိုယ်နဲ့ရော ဘယ်လိုမကိုက်ညီတာတွေရှိနိုင်မလဲ အရင်ဆုံးလေ့လာပါ။ တစ်ချို့ဆို TD တွေ့ဖူးတယ်။ အရမ်းချေးများတာမျိုးပေါ့။ ခရီးသွားရင် ဟိုဟာလိုချင်တယ်၊ ဒါစားချင်တယ်​၊ ဒါမှမရရင်မစားဘူး၊ ဒါမျိူးမဟုတ်ရင် မသွားဘူး အဲ့ဒါမျိုးပေါ့။ တောင်ပေါ်ဒေသရောက်ပီး ပင်လယ်စာစားချင်လို့ ပူဆာတာမျိုးတို့ အဲ့လိုမျိုးဆို ခရီးသွားတဲ့လူလဲအတဆင်မပြေ တစ်ဖက်က Service ပေးရတဲ့လူကိုလဲအခက်တွေ့စေပါတယ်။ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာဆို လုပ်ပေးကြမှာပါ။ အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆို ကိုယ်ကမဖြစ်နိုင်တာမျိုး သွားတောင်းဆိုနေလို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ အဓိက ပြောချင်တာကတော့ ခရီးသွားရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန် နားလည်မှုလဲရှိပါစေ၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘက်က Positive Thinking အကောင်းမြင်စိတ်လေးနဲ့ တွေးပေးလိုက်ရင် ကိုယ်လဲ ဒီခရီးစဉ်မှာ စိတ်ကသိကအောက် မဖြစ်တော့ပဲ ပျော်ရွှင်ရမှာပါ။
ကျမရဲ့ ဦးထုပ်ကြီးကို သူတို့သိပ်သဘောကျ
တူတူသွားပြီး ခင်ခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ
အသက်ကြီးပေမယ့်ချင်းပြည်ထိ ရောက်အောင်လာပြီး အရမ်းပျော်တတ်တဲ့ uncle တွေ ကိုယ့်ကိုဆိုလဲ ချစ်ကြတော့ မိတ်ဆွေတွေပိုတိုး
နောက်က ပျော်နေကြတဲ့ ကလေးတွေကအသက်
ဆေး (၁) က မောင်လေး၊ ညီမလေးတွေနဲ့ ခရီးသွားရင်း ခင်ခဲ့ကြပြီး ခုဆို သုံး လေးခေါက်တောင် တူတူသွားခဲ့ပြီးပြီ
ကလောကနေ အင်းလေးကို ၂ ရက်လမ်းလျှောက်ကြတဲ့အဖွဲ့
အစကတော့ မခင်ဘူး လမ်းမှာတင် သူငယ်ချင်းဖြစ်သွားကြတယ်လေ
ကိုယ်မသိတဲ့ မိန်းကလေး ၁၀ ယောက်နဲ့ ချင်းပြည်တောင်မြောက်ကို ပတ်ခဲ့စဉ်က
ခရီးသွားရင် စိတ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအေးချမ်းအောင်ထားပါ။ ခရီးထွက်တယ်ဆိုကတည်းက စိတ်ကိုအနားယူချင်လို့၊ အပန်းဖြေချင်လို့၊ တစ်ချို့ဆို စိတ်တွေမွန်းကြပ်လာလို့ စသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ ခရီးထွက်ရင် ပျော်ချင်ကြတာချည်းပဲမဟုတ်လား။ အဲဒါကြောင့် ခရီးထွက်ရင် စိတ်ကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးပါးထားပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ်ရှုပ်မခံပါနဲ့။ ကိုယ်နဲ့အတူခရီးသွားဖော်ပါလာရင်လဲ အဆင်ပြေအောင်နေပါ။ တစ်ချို့ဆို ပါလာတဲ့လူနဲ့ကို ညှိလို့မရတာမျိုးတွေ့ဖူးလို့ပါ
ချင်းပြည်ကို New year သွားတော့ နှစ်ဦးအလှူ
ချင်းပြည်က ပါးနီနီလေးတွေနဲ့ ခလေးလေး
အန်တီ သမီးထောင်းမယ် ဆိုပီး
ခွေးကတော့ ရောက်တဲ့နေရာမှာ ချစ်တယ်
အများနဲ့ခရီးသွားတဲ့အခါ လူပေါင်းစုံ စိတ်တစ်မျိုးစီနဲ့မို့ ကိုယ့်အကြိုက်သူ့အကြိုက်၊ ကိုယ်အမြင်သူ့အမြင်လေးတွေ မတူတာတွေ သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာတွေ ဖြစ်တတ်တာမို့ကိုယ့်ဘက်က စိတ်ကို အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် ကြည့်တတ်ဖို့ နားလည်သည်းခံဖို့တော့လိုပါမယ်နော်….
ဘန့်ဘွေးကျင်းသွားတုန်းက ရေတံခွန်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ အမတွေနဲ့လည်း ခင်သွားတာပဲ
ကိုယ်သွားမယ့်ခရီးနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိရဲ့လား မသွားခင် အရင်စဉ်းစားပါ TD ပြောချင်တာကတော့ ကိုယ်က ခန္ဓာကိုယ်ကလဲ ပျော့တိပျော့ဖက် အားမရှိတဲ့သူမျိုး၊ ရောဂါအခံတစ်ခုခုရှိတဲ့သူမျိုးဆိုရင် တောင်တက်တာတွေ၊ Adventure သွားတာမျိုးတွေကိုရှောင်သင့်ပါတယ်နော်။ ကိုယ့်စိတ်ကအရမ်းထက်သန်နေလို့ ငါမရရအောင် သွားမယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့နော်။ အဲ့လို တောင်တက်၊ Trekking၊ Adventure ဆိုတာမျိုးက တစ်ဦးတည်း လုပ်ဆောင်ရတဲ့ Activity မျိုးမဟုတ်ပဲ အများနဲ့အတူသွားလာရတဲ့ခရိီးတွေဆိုတော့ ကိုယ့်ကြောင့်လဲ သူများကိုစိတ်အနှောင့်ယှက်မဖြစ်စေချင်ဘူးလေနော်။ ဟိုရောက်မှ မလိုက်နိုင်လို့ လမ်းတစ်ဝက်မှာ ကျန်ခဲ့တာတို့၊ ငါမလိုက်တော့ဘူး ငါ့ကိုဒီနေရာမှာပဲထားခဲ့လိုက်တော့ ပြန်တော့မယ် စသဖြင့်ညည်းတွားနေတာမျိုးက နှစ်ဖက်လုံးကိုအခက်တွေ့စေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ်ကအနုအယွသမားဆိုရင် Luxuary Trip ဒါမှမဟုတ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ခရီးမျိုးပဲသွားဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်။
နွားလှည်းမောင်းတဲ့ အဘနဲ့လဲ သူငယ်ချင်းဖြစ်သွားတာပဲ
TD ပြောတဲ့ အလှူလုပ်ပါဆိုတာမျိုးက ပွဲလမ်းသဘင်အခမ်းနားတွေနဲ့ အလှုလုပ်ခိုင်းတာမျိုးကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကိုယ်သွားမယ့်အရပ်ဒေသမှာ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ တွေ့ရနိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားပြီး လှူလို့ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ TD ဆိုခရီးသွားရင် ဘီစကစ်တွေ၊ မုန့်ထုတ်လေးတွေ၊သကြားလုံး စသဖြင့် သယ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ လမ်းမှာ လမ်းပြင်နေတဲ့ အလုပ်သမားတွေတွေ့ရင်လဲ ကိုယ်တိုင်ဆင်းလှုလို့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ TD က ကလေးချစ်တတ်တော့ ရောက်တတ်နေရာမှာ ကလေးတွေအတွက် မုန့်လေးတွေ ဝယ်ပြီး လှူလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က ပိုက်ဆံစုပြီးခရီးထွက်လာရတာဆိုတော့ စျေးကြီးတာမျိုးလဲမလှုနိုင်ဘူးလေ။ အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ်သွားတဲ့ ခရီးမှာ အမှတ်တရလဲဖြစ်အောင်၊ ကုသိုလ်လဲရအောင် အဲ့လိုအလှူလေးတွေ လုပ်ကြည့်ပါနော်။ ပိုပြီးတော့လဲ ပျော်ဖို့ကောင်းမှာအမှန်ပါ။
ခရီးသွားရင် မိတ်ဆွေအသစ်ဖွဲ့တတ်ပါစေ ဒါကတော့ Solo trip သွားတဲ့လူတွေ၊ တခြား အသင်းအဖွဲ့နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး သွားတဲ့လူတွေကို အဓိက ရည်ညွှန်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကအပြင်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ ချေနေပါစေ ခရီးသွားရင်တော့ မချေပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်
အကုန်လုံးနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေပါ။ တစ်ယောက်တည်းသွားတယ်ဆိုရင်လဲ ကိုယ်က Hostel တည်းမယ်ဆိုရင် အခန်းထဲမှာလဲ နိုင်ငံပေါင်းစုံက မိတ်ဆွေအသစ်တွေ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေရသွားနိုင်ပါတယ်နော်။ တစ်ယောက်တည်း မျက်နှာကြီးကို ဆူပုတ်ပြီးမနေပါနဲ့။ တောင်တက်သွားတာတို့၊ Trekking လမ်းလျှောက်တာတို့ဆိုရင်လဲ ကိုယ်Join လိုက်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာ ကိုယ်မသိတဲ့လူတွေအများကြီး ပါလာမှာပါ။ လမ်းတစ်လျှောက် မိတ်ဆွေဖွဲ့၊ စကားတွေပြော အဲ့လိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းဖြင့် မိမိမှာ စကားပြောစွမ်းရည်၊ ပေါင်းသင်းနိုင်စွမ်းတွေကို တိုးတတ်စေတဲ့အပြင် လူတွေအကြောင်းကိုလဲ ပိုပြီးလေ့လာသိရှိနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ TD ကတော့ ရောက်တဲ့နေရာမှာ တွေ့တဲ့လူနဲ့ တည့်အောင်ပေါင်းတယ်​။ စကားတွေပြောတယ်။ တခါတလေ ခရီးမှာတွေ့ပြီး ခင်ရင်းအခုချိန်ထိ သူငယ်ချင်းဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်။ တစ်ခုတော့သတိထားရမှာပေါ့။ အဲ့လူက လူဆိုးလား လူကောင်းလားဆိုတာကတော့ သေချာကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့
အမယ် လက်နှစ်ချောင်းထောင်ဆိုတာနဲ့ အဆင်သင့်
ချစ်တဲ့စိတ်ဖြင့်ခရီးသွားပါ ခရီးသွားတဲ့အခါ မိမိနဲ့အတူ ချစ်တဲ့စိတ်လေးကိုလည်း တစ်ပါတည်းသယ်ဆောင်သွားပါ။ ချစ်တဲ့စိတ်လေးထည့်ပြီး ခရီးသွားရင် အကျိုးယုတ်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ကို လူချစ်လူခင်ပိုပေါလာမယ်။ အပေါင်းသင်းတွေတိုးလာမယ်၊ မိမိကိုယ်တိုင်လဲ ယုံကြည်မှုတွေပိုတိုးလာမယ်။ TD ကတော့ကလေးချစ်တတ်တယ်၊ ခွေးချစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ ရောက်တဲ့အရပ်မှာ ကလေးတွေနဲ့ ခင်တော့တာပဲ။
ခွေးလေးတွေတွေ့ရင်လဲ ဓာတ်ပုံတူတူပြေးရိုက်လိုက်တာပါ။ ဒါကတော့ ခွေးချစ်တဲ့သူတွေနားလည်မှာပါ။ ချစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာ လူတွေကိုချစ်ရမယ်ဆိုပြီး ပြောတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်သွားမယ့် ဒေသ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကို ချစ်တတ်ပါစေနော်။ ချစ်တဲ့စိတ်လေးထည့်လိုက်ရင် အမှိုက်ဆိုလဲ ကြုံတဲ့နေရာမှာ မပစ်ဖြစ်တော့ဘူး။ ကိုယ်ပစ်လိုက်တဲ့ အမှိုက်လေးကြောင့် ဒီနေရာကြီး အလှပျက်သွားမှာ မလိုလားဘူးလေ။ သဘာဝကြီးကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းဖြင့် ခရီးသွားပါ။
အကုန်လုံးနဲ့ ခင်အောင်ပေါင်းတတ်တာ TD အကျင့်ပါ
ခရီးသွားရင်း ဒေသခံလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက် အားပေးကူညီပါ။လူတိုင်းကို ဒီနေရာမှာ ဒီလက်ဆောင်၊ ဒီပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ပါလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍ ကိုယ်က အိမ်ပြန်လက်ဆောင်တွေ၊ ဒေသထွက်ထုတ်ကုန်တွေ အစားအသောက်တွေဝယ်မယ်ဆိုရင် ဒေသခံတွေကို ဦးစားပေး​ပြီး တတ်နိုင်သလောက် အားပေးပါ။တစ်ချို့ဒေသတွေမှာ CBT လို့ခေါ်တဲ့ ရပ်ရွာအခြေပြု၊ လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်။ အဲ့လိုနေရာတွေမှာ ဒေသခံတွေကိုပိုပြီး ဦးစားပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်ရရင် သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါနော်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကို မှီခိုအားကိုးပြီး လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ ဒေသခံတွေရှိလို့ပါ။ စာလေးလဲ နည်းနည်းရှည်သွားပြီဆိုတော့ ဒီမှာပဲရပ်လိုက်တော့မယ်နော်။ ဒါကတော့ TD ခရီးသွားရင်း သိလာခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ ဗဟုသုတတွေကိုပြန်ပြီး Sharing လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက် Blogလေးမှာတော့ခရီးသွားရင် ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ သွားသင့်တယ်၊ ဘယ်လိုမျိုးတွေ ဆောင်သင့်/ ရှောင်သင့်တယ်ဆိုတာကိုရေးပေးမယ်နော်။ အားလုံးပဲ ချစ်တဲ့စိတ် အကောင်းမြင်စိတ်လေးနဲ့ ခရီးသွားနိုင်ကြပါစေရှင်